मेरो कपाल किन झर्दै छ? कपाल झर्नेका कारणहरू जान्नुहोस् - स्वास्थ्य शिक्षा | अगस्ट 2021
समाचार, कल्याण कल्याण औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समुदाय, कम्पनी चेकआउट समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस औषधि बनाम मित्र कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> मेरो कपाल किन झर्दै छ? कपाल झर्नेका कारणहरू जान्नुहोस्
मेरो कपाल किन झर्दै छ? कपाल झर्नेका कारणहरू जान्नुहोस्
कपाल झर्नु, जसलाई एलोपेसिया पनि भनिन्छ, टाउकोको छाला वा शरीरको अन्य भागहरूबाट कपाल झर्नु हो। कपाल झर्ने समस्या धेरै कारणहरुमा हुन सक्छ, जस्तै हर्मोनको स्तरमा परिवर्तन, बुढ्यौली, वा एक चिकित्सा अवस्थाको कारण, किन कि यो प्रश्नको उत्तर दिन गाह्रो हुन सक्छ: किन मेरो कपाल बाहिर झरिरहेको छ? यसको कपालहरू र यसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने बुझ्नको लागि केश झर्नेको बारेमा थप गहिराई हेरौं।
मेरो कपाल किन झर्दै छ?
कपाल झर्ने समस्या कपालको हल्का पातलो हुनुदेखि कपालको कपालमा पुग्ने वा पूरै तालुमा पुग्नेसम्म हो। औसत व्यक्ति गुमाउँछ १०० प्रति दिन कपाल, त कपाल गुमाउनु स्वाभाविक हो, तर धेरै व्यक्तिले यस भन्दा बढी कपाल झर्ने अनुभव गर्दछन्। केश झर्ने समस्या केहि व्यक्तिहरूको लागि प्रारम्भिक रूपमा उनीहरूको २० वा .० को उमेरसम्म सुरु हुन सक्छ, तर प्रायः व्यक्तिको लागि, केश झर्ने प्रक्रिया पछि बढ्दै जान्छ प्राकृतिक जीवनको प्रक्रियाको रूपमा उनीहरूको जीवनमा। 50० वर्षको उमेरबाट % 85% पुरुषहरूको कपाल पातलो हुनेछ।
कपाल झर्नु अक्सर सौहार्दपूर्ण र बुढेसकालको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ, तथापि, यो अझ गम्भीर अन्तर्निहित चिकित्सा अवस्थाको संकेत हुन सक्छ, भन्छ। ग्यारी Linkov , एमडी, एक अनुहारको प्लास्टिक सर्जन र न्यूयोर्कमा कपाल पुनर्स्थापना विशेषज्ञ। केश झर्नु केही औषधीहरूको साइड इफेक्ट पनि हुन सक्छ।
गन्धापनले पुरूष र महिला दुबैलाई असर गर्न सक्छ, जबकि पुरुष-ढाँचाको टक्कैपन महिला-ढाँचाको ट्याल्डनेस भन्दा बढी सामान्य छ। पुरुष-ढाँचा टाउनेपन सामान्यतया विरासतमा आउँदछ र कुनै पनि उमेरमा सुरु हुन सक्दछ। केहि पुरुषहरूले केवल एक रिडि hair हेयरलाइन प्राप्त गर्न सक्दछन् जबकि अरूले उनीहरूको सबै कपाल गुमाउन सक्छन्। महिला-ढाँचाको टक्कलपन प्राय: भागमा पातलो हुँदै जान्छ र त्यसपछि टाउकोको बाँकी भागमा पातलो हुन्छ। यसले विरलै कूल झर्ने परिणाम दिन्छ र धेरै महिलाले मात्र कपाल पातलो पार्ने अनुभव गर्दछन्।
तपाइँ तपाइँको केश बाहिर झर्नबाट जोगाउन के गर्न सक्नुहुन्छ यसले पहिलो स्थानमा के कारणको कारणले निर्भर गर्दछ। हामी पछि कपाल झर्ने उपचारको लागि केही विकल्पहरू हेर्नेछौं।
कपाल झर्ने कारणहरू
यदि तपाईंले कपाल झर्ने महसुस गरिरहनु भएको छ र तपाईंको कपाल झर्दै गइरहेको छ भने, यो निम्न कारणहरूमध्ये एक हुन सक्छ।
प्राकृतिक बुढेसकाल प्रक्रिया केश झर्नेको एक प्रमुख कारण हो जसले पुरुष र महिला दुबैलाई असर गर्दछ। समयको साथ, कपालको वृद्धि ढिलो हुन्छ र कपालको फोलिकल्सले अन्तत: बढ्दो कपाल पूरै रोक्दछ। यी दुई चीजहरूले संयोजनको कारणले टाउकोको कपाल पातलो र खस्कन्छ। 35 35 वर्षको उमेरमा, दुई तिहाई अमेरिकी पुरुषहरूले केही हदसम्म कपाल झर्ने अनुभव गर्नेछन्। Menopausal महिला मध्ये, को बारेमा दुई तिहाइ पातलो पातलो वा टक्कल दागहरू अनुभव गर्नुहोस्।
२. Alopecia areata
एलोपेसिया एक ऑटोइम्यून छाला रोग हो जहाँ शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले कपालको फोलिकाहरूलाई आक्रमण गर्दछ। किनकि कपालका फोलिकल्सले कपाल ठीक ठाउँमा राख्छ, जब तिनीहरू सम्झौता गरिन्छ, कपाल बाहिर झर्छ। यो स्वत: प्रतिरक्षा रोगले टाउकोको अनुहार, अनुहार र शरीरभरि कपाललाई असर गर्न सक्दछ, र केहि केसहरूमा यसले सम्पूर्ण कपाल गुम्न सक्छ। यो अनुमान छ कि धेरै को रूपमा 8.8 मिलियन मानिस संयुक्त राज्य अमेरिकामा एलोपेसिया areata द्वारा प्रभावित छन्, सबै उमेर, लिंग र जातीय समूहका मानिसहरुलाई प्रभावित गर्दछ।
An. अनागेन इफ्लुभियम
अनागेन इफ्लुभियम कपालको चक्रको पहिलो चरणको अवधिमा कपालको असामान्य र द्रुत क्षति हो। यस प्रकारको कपाल झर्ने सम्भावना मेडिकल उपचार वा विषाक्त रसायनको जोखिमको कारण हुन्छ। क्यान्सर उपचार प्रायः एनाजेन इफ्लुभियमको कारण हुन्छ, तर कपाल सामान्यतया औषधीको सम्पर्क पछि समाप्त हुन्छ। एनाजेन इफ्लुभियम हो सम्भवतः महिला र पुरुषलाई लाग्ने औषधि वा विषाक्त पदार्थको कारणले कपाल झर्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ।
And. Androgenetic एलोपेसिया
एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेसियालाई महिला वा पुरुष-ढाँचाको टक्कल पनि भनिन्छ। यो कपाल झर्नेको सामान्य प्रकार हो जुन केशलाई राम्रोसँग परिभाषित ढाँचामा झर्छ र अक्सर मन्दिरहरू माथिबाट शुरू हुन्छ। पुरुषहरू प्राय: टाउकोको मुकुटमा कपाल पातलो हुनुका साथै सेयर कपाल झर्ने अनुभव गर्दछन्, यद्यपि केही पुरुषहरू अन्तत: टाउकोमा पुग्नेछन्। महिलाले प्रायः आफ्नो कपाल झर्ने कुरा देख्छन् तिनीहरूका भाग पातलो हुनुका साथै सामान्य रूपमा उनीहरूको अगाडिको हेयरलाइनबाट कपाल हराउँदैनन्।
एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेसिया एक कपाल झर्ने प्रकारको प्रचलित प्रकार हो जसले असर गर्छ Million करोड पुरुष र million करोड महिला अमेरिका मा। एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हुने जोखिम उमेरसँगै बढ्छ, तर केही व्यक्तिहरूको लागि, उनीहरूको कपाल झर्ने नै किशोरावस्थामा नै सुरू हुन्छ। जे होस् एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेशियाको सही कारण अज्ञात छ, जेनेटिक्स र वातावरणीय कारकहरूले योगदान गर्न सक्छन्।
naproxen ले तपाईंलाई औषधि परीक्षणमा विफल बनाउँछ
Hor. हार्मोनल असंतुलन
हर्मोनल परिवर्तनले दुबै पुरुष र महिला दुबैको कपाल झर्न सक्छ। थाईरोइड हर्मोनको कम उत्पादन गर्ने एक अण्डरेटिभ थाइरोइड प्रणालीले हर्मोनको स्तर सामान्य नभएसम्म कपालको विकास रोकिन्छ। रजोनिवृत्तिबाट गइरहेका केहि महिलाले कपाल झर्ने अनुभव गर्दछन् किनकि उनीहरूको प्रोजेस्टेरोन र एस्ट्रैडिओलको स्तर तल झर्छ, जसले कपालको वृद्धि सुस्त बनाउँछ। चिकित्सा अवस्था पोलिसिस्टिक अंडाशय सिन्ड्रोम (पीसीओएस) पनि कपाल झर्नेसँग सम्बन्धित छ किनकि यसले कपालको वृद्धिको लागि जिम्मेवार हार्मोनहरूलाई कम गर्दछ। 60० बर्ष भन्दा माथिका महिलाहरुसँगaभन्दा बढी हुन्छ %०% हार्मोनल कपाल झर्ने को अनुभव को संभावना।
धेरै महिलाले बच्चा जन्माएपछि धेरै कपाल बगाउने अनुभव गर्छन्, जुन प्रसूति पछि सामान्यतया एस्ट्रोजेनको स्तर खस्ने कारण हुन्छ। बहाउँदा सामान्यतया चुचुरो हुन्छ चार महिनाको प्रसुति र प्राय जसो महिलाले एक वर्षमा आफ्नो सामान्य कपाल परिपूर्णता प्राप्त गर्दछन्।
Sc. खोपडीको संक्रमण
खोपडीमा संक्रमण भएको खण्डमा हल्कादेखि गम्भीर कपाल खस्कन सक्छ। टिना क्यापिटिस, वा फंगल दादुरा, एक प्रकारको फ fun्गल संक्रमण हो जसले कपाल झर्ने गर्दछ। ढुसीले टाउकोको छालामा कपालका कपाल र कपालको शाफ्टलाई हमला गर्दछ, र कहिलेकाहिँ भौं र आँखाहरू। टिना क्यापाइटिसले प्रायः उमेरका बच्चाहरूलाई प्रभाव पार्दछ And र १ , तर यसले कुनै पनि उमेर समूहलाई असर गर्न सक्छ।
दुबै पुरुष र महिला दुबैको कपाल झर्नुको सबैभन्दा सामान्य कारण तनाव हो। तीन किसिमको कपाल झर्नु सामान्यतया तनावसँग सम्बन्धित छ:
टेलोजेन इफ्लुभियम: तनावपूर्ण जीवन घटनाका कारण अचानक कपालहरू आरामको चरणमा जान्छन्। बच्चा जन्माउने, बिमारी, मनोवैज्ञानिक तनाव, वा वजन घटाउने जस्ता तनावहरूले यस प्रकारको कपाल गुम्न सक्छ, र यसले कसैलाई भन्दा बढी गुमाउन सक्छ। प्रति दिन 300 कपाल ।
Alopecia areata: एक ऑटोइम्यून रोग जसले कपालको फोलिकल्सलाई हमला गर्दछ। तनावपूर्ण जीवन घटनाहरूले आक्रमणकारी कपालको फुलहरूमा प्रतिरक्षा प्रणालीलाई ट्रिगर गर्न सक्दछ।
ट्राईकोटिलोमनिया: TO मनोरोग विकार जसले कसैलाई दोहोर्याएर आफ्नो कपाल बाहिर तान्न को लागी, यति धेरै कि यो कपाल झर्ने को हुन्छ। यो अक्सर तनाव द्वारा ट्रिगर गरिएको छ र एक व्यक्तिको सामाजिक र कार्य जीवनमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ।
T. ट्र्याक्सन एलोपेशिया
ट्र्याक्सन एलोपेशिया एक प्रकारको मेकानिकल केश झर्ने समस्या हुन्छ जब कपालको फोलिकल्स बारम्बार तान्ने वा तनावमा पर्ने गर्छ। कडा कपालका केशहरू जस्तै बन, ब्रेडेज, वेभ्स, कर्न्रोस, र पोनीटेलहरू ट्र्याक्सन एलोपेशियाको सबैभन्दा सामान्य कारण हो।
कपाल झर्ने उपचार थप कपाल झर्न रोक्न र कपाल फेरि क्रेज गर्ने उद्देश्य। महिला र पुरुष कपाल झर्नेका लागि यहाँ केही उत्तम उपचारहरू छन्।
केही औषधीहरूले थप केश झर्नेबाट रोक्न मद्दत गर्दछ र कपाल पुनः कपाल गर्न कपाल follicles उत्तेजित गर्दछ। यहाँ केहि सामान्य औषधिहरू छन् जुन एक डाक्टरले सिफारिस गर्न सक्छन् वा कपाल झर्नेको लागि सिफारिस गर्न सक्छन्:
Minoxidil: ब्रान्ड-नाम औषधि रोजाइनको जेनेरिक संस्करण, जुन दुबैका लागि उपलब्ध छ तर र महिला । यो एक सामयिक उपचार हो जसले नयाँ कपालको विकासलाई प्रोत्साहित गर्दछ र कपाल झर्न रोक्न मद्दत गर्दछ। Minoxidil तरल वा फोमको रूपमा ओभर-द-काउन्टर खरीद गर्न उपलब्ध छ र सामान्यतया प्रति दिन दुई पटक लागू गरिन्छ।
Finasteride: एक नुस्खा औषधि जो पुरुष-ढाँचा टाउकोको उपचार गर्दछ। Finasteride (ब्रान्ड प्रोपेसिया भनेर पनि चिनिन्छ) टाउकोको टुप्पोमा कपाल झर्ने सुधार गर्दछ र कपाल झर्ने घटाएर र नयाँ कपालको बृद्धि बढाउँदै एयरलाइन्सलाई शान्त पार्दछ।
Anti-androgens: केही महिलाहरू जसले minoxidil लाई राम्रो प्रतिक्रिया गर्दैनन् anti-androgens लाई राम्रो प्रतिक्रिया दिन सक्दछ हार्वर्ड स्वास्थ्य । एन्टी-एन्ड्रोजेनहरू, जस्तै स्पिरोनोलाक्टोनले शरीरमा पुरुष हार्मोनको उत्पादन घटाउँछ जसले महिलामा कपाल झर्ने प्रक्रियालाई तेज गर्न सक्छ। यी औषधीहरू विशेषतया पीसीओएस भएका महिलाहरूका लागि उपयोगी हुन सक्दछन् जसले अधिक पुरुष हर्मोनहरू उत्पादन गर्दछन्।
Corticosteroids: को नेश्नल एलोपेसिया अरेटा फाउन्डेशन एलोपेसिया इरेटाटाका कारण कपाल झर्ने समस्याको लागि राम्रो उपचार विकल्पको रूपमा सामयिक स्टेरोइडलाई सूचीकृत गर्दछ। केही अध्ययनहरूले देखाए कि अत्यधिक शक्तिशाली सामयिक स्टेरोइडले २ hair% सम्म कपालको वृद्धि सुधार गर्न सक्छ।
एन्टिफंगल: कपाल झर्नेको लागि जुन फgal्गल संक्रमणको कारणले भयो, एन्टिफंगल औषधिहरूले मद्दत गर्न सक्दछन्। सामयिक एन्टिफुंगलहरू कपालको फोलिकल्ससम्म पुग्न पर्याप्त हुँदैन, त्यसैले एन्टिफंगलहरू मौखिक रूपमा लिनु पर्छ। ग्रिफुलभिन र लामिसिल दुई एफडीए-अनुमोदित एन्टिफंगलहरू टिना क्यापाइटिसका लागि हुन्।
कसरी कपाल झर्ने औषधिहरुमा बचत गर्ने
औषधि वर्ग पुरुष वा महिलाका लागि स्वीकृत? एकलकेयर बचत
Minoxidil वासोडिलेटर दुबै कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Finasteride --अल्फा रिडक्टेज अवरोधक दुबै कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
फ्लुटामाइड एन्टी-एन्ड्रोजन पुरुष मात्र कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
स्पिरोनोलाक्टोन एन्टी-एन्ड्रोजन दुबै कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
प्रेडनिसोन कोर्टिकोस्टेरोइड दुबै कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
ग्रिसेफुलविन एंटी-फंगल दुबै कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Lamisil एंटी-फंगल दुबै कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
फलाम आहार पूरक दुबै कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
प्राकृतिक र घरेलु उपचार
केहि प्राकृतिक र घरेलु उपचारले कपाल झर्नेको उपचार गर्न सक्दछ र प्राकृतिक रूपमा केशलाई पुन: सहयोग गर्दछ। यहाँ केश झर्ने केही उत्तम प्राकृतिक उपचारहरू छन्:
फलामका पूरकहरू: पौष्टिक कमीहरू कपाल झर्ने सम्बन्धमा जोड्न सकिन्छ, विशेष गरी महिलाको लागि । यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंसँग फलामको कमी छ भने, तपाईंको डाक्टरले यो पत्ता लगाउनको लागि एउटा परीक्षण चलाउन सक्छ। यदि तपाईं फलामको कमी हुनुहुन्छ भने फलामको पूरक लिनाले तपाईंको कपाल झर्न मद्दत गर्दछ।
आवक: एक मौखिक समुद्री प्रोटिन पूरक जसले अस्थायी कपाल पातलो हुने महिलाहरूको लागि कपालको बृद्धिलाई मद्दत गर्दछ। एक २०१ study अध्ययन पत्ता लगाई कि Viv वित्तीय कपाल को बढावा दिन्छ र कपाल झर्ने घटाउँछ।
स्वस्थ आहार: स्वस्थ खानाले समग्र कपालको स्वास्थ्यको लागि ठूलो फरक पार्न सक्छ। सम्पूर्ण खाद्य पदार्थ र पोषक तत्व युक्त आहार हुनेछस्वस्थ कपाल विकास को बढावाशरीरलाई आवश्यक पोषकहरूको आपूर्ति गरेर यसलाई सही रूपमा कार्य गर्न आवश्यक छ। कपालमा बढेको पोषणयुक्त पदार्थहरूले भरिएको खाद्य पदार्थहरूमा कद्दूको दाना, चिया बीज, फ्याँसको दाना, जंगली-समातिएको सामन, हरियो चिया, हड्डी शोरबा, र थोरै मात्रामा सामेल छन्।क्याफिन।
ध्यान र तनाव कम गर्ने गतिविधिहरू: तपाईको कपाल झर्ने समस्यालाई कम गर्न तपाईको दैनिक तालिकामा ध्यान, योग, हिंडाई वा पौडी खेल्ने केही तनावमुक्त गतिविधिहरू समावेश गर्न सक्नुहुन्छ।
कपाल प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा
कपाल प्रत्यारोपण शल्यक्रिया माथीको टोकरीको साना टुक्रा लिन्छ र तिनीहरूमा कपालका फोलिकहरू हुन्छन् र तिनीहरूलाई टक्कन हुने ठाउँमा पुर्‍याउँछन्। एक डाक्टर वा त्वचा विशेषज्ञले शल्यक्रिया गर्नेछ, र बिरामी सामान्यतया स्थानीय एनेस्थेसिया अन्तर्गत हुन्छ।
खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) स्वीकृत भएको छ दुई कम प्रकाश लेजरहरू कपाल झर्नेको उपचार गर्न मद्दत गर्न। हेयरम्याक्स लेजरकोम्बले महिला-ढाँचा कपाल झर्ने र पुरुष बान्की कपाल झर्ने उपचारको लागि अनुमोदन गरेको छ, र Theradome LH80 PRO हेलमेट पनि कपाल झर्ने उपचार को लागी अनुमोदित छ।
तपाईंको लागि सही कपाल झर्ने उपचार के तपाईंको कपाल झर्को कारण केमा निर्भर गर्दछ। उत्तम उपचार योजना छनौट गर्ने उत्तम तरिका भनेको आफ्नो कपाल झर्ने चिन्ताको बारेमा आफ्नो चिकित्सकसँग कुरा गर्नु हो। एक डाक्टर वा त्वचा विशेषज्ञले तपाइँको कपाल झर्नुको कारण के हो निर्धारण गर्न मद्दत गर्न सक्छ र तपाइँको मेडिकल ईतिहास र लक्षणहरूको आधारमा उपचार योजनाको सिफारिश गर्दछ।
के को लागी औषधि nabumetone प्रयोग गरीन्छ
कसरी आफ्नै बाट एक यूटी लाई उपचार गर्ने
स्वास्थ्य बीमा नभएका व्यक्तिको लागि क्लिनिकहरू
डेक्स्ट्रोमफेटाइन-एम्फेटमाइन अन्य औषधिहरू समान वर्गमा
रोकिने नाक कहिले सम्म रहन्छ